အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: We live there!
ဒီကွေ့ကို ဒီတက်နဲ့လှော်လိုက်၊ ဟိုကွေ့ကို ဟိုတက်နဲ့လှော်လိုက်
ရေတစ်ချို့က နိမ့်ရာဆို မစီးပေမယ့်
မီးတွေက အောက်ထိဆင်းလောင်ချင် လောင်လိမ့်မယ်
မလျော့မတင်း စောင်းကြိုးညင်းကိုပဲ လိုက်နာရတယ်
နေ့ပြောလို့ နောက်ကြည့်စရာမလို ညပြောလို့ အောက်ကြည့်စရာမလို
တစ်တက် နှစ်တက် ကြက်သွန်လိုက်စားတဲ့လူနဲ့
နွံနစ်နေတဲ့ ပတ္တမြားတွေ များမယ်
ကျည်ထောက်စွပ် ဖြောင့်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ ခွေးမြီးတိုတွေများမယ်
ဆန်ပိုရချင်တဲ့ မျက်စိလည် ဖိုးသူတော်နဲ့
ရဲရဲကြီး တိုးပြီး ပျော်ဝင်လိုက်ရုံ။
၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
there is no idea to destroy myanmar proverb.
it is playing words and see the life in other point of view.
just wanna tie my brain & heart not to consume the extreme.
inspiration is here :)
ငခုံးမလည်း သူ့ဖာသူနေ ကျန်တဲ့ငါးတွေလည်း မိုးအိမ်ပြောသလိုသူ့ဖာသူနေရင် ငခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး မပုတ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်
မဏ္ဍပ်တိုင်တက်နေတဲ့ အလှူရှင်တွေ ဒီလောကမှာ များမှများရယ်။။
ကိုယ်တွေလဲ ပါနေပြီလား မပြောတတ်..
Wayne Dyer ပြောဖူးတယ်..။
"If you change the way you look at things, the things you look at change." တဲ့..။
အရာရာကို ကိုယ် မျှော်လင့်သလို၊ ဖြစ်စေချင်သလို မကြည့်ပဲနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အရာတွေကို ပြန်လိုက်ကြည့်တာပါ...။ တကယ်တော့လည်း လူမှုရေးရာဝန်းကျင်မှာ ဘယ်ဟာကိုမှ ရှောင်ဖယ်လို့ မရဖူး မဟုတ်လား..။ အတွေးတွေကို ချရေးကြည့်တော့ မြန်မာ စကားပုံတွေ ဖျက်ဆီးတယ်များ ဖြစ်နေမလား တွေးမိသေးတယ်....။ :) မဏ္ဍပ်တိုင်ဆိုတဲ့သဘောမှာ ကျွန်တော်ကတော့ တက်ရတယ် ထင်တာပဲ.. :) advertising လုပ်ခြင်းဆိုတာထက် တစ်ချို့အရာတွေက ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို ရယူထားမှ ဆက်လျှောက်လှမ်းလို့ ရတာမဟုတ်လား..။ ဒီလိုပဲ တွေးမိတယ် :D
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် .. အဲလိုတွေလေ .. အဲ မျက်နှာမသစ်ရသေးပဲ ဖတ်မိနေပါ့လား .. :D
တခါတခါလည်း လူတွေကို စိတ်ကုန်မိပါရဲ့
ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ကိုယ့်အပေါ်လဲ စိတ်ကုန်နေတဲ့လူတွေ ဘယ်လောက်များမလဲပေါ့ .. :P